Ny orinasam-piainana amin'ny alina sy ny COVID dia afaka miara-mipetraka
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Ny orinasam-piainana amin'ny alina sy ny COVID dia afaka miara-mipetraka
Niteraka fahavoazana lehibe ny fatiantoka ara-toekarena atrehin'ny orinasam-piainana sy ny vokany mifandraika mivantana amin'ny indostria hafa toy izany fizahan-tany izany
2020 dia nitondra a tsy fahampian'ny fahalalàna sy marefo momba ny virus izay nanjary areti-mandringana, tamin'ny tapaky ny taonjato faha-21
SieXsein Global dia teraka tamin'ny firaisana iraisam-pirenena ekipa manam-pahaizana izay manana tantara lava eo amin'ny sehatry ny indostria
Ny indostrian'ny fiainana amin'ny alina dia mety ho vahaolana amin'ny areti-mandringana ankehitriny satria mety ho loharanom-pahalalana voalohany izany miaraka amin'ireo manampahefana ary manao toy ny firewall hahitana ny fihanaky ny viriosy
Herintaona lasa izay, ny toeram-pialam-boly manerantany dia voatery nanidy varavarana taorian'ny fielezan'ny virus coronavirus haingana. Tsy ny toeram-piantsonana ihany no voakasik'izany fa ny sasany amin'ireo fetibe mozika manandanja indrindra toa ny Coachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland Winter ary Snowbombing dia nanambara ihany koa ny fanemorana azy mba hifehezana ny valanaretina.
Ny fatiantoka ara-toekarena atrehin'ny indostria sy ny vokany mifandraika mivantana amin'ny indostria hafa toy izany fizahan-tany izany dia niteraka fahavoazana lehibe ary ny fanampiana sahaza izay nangatahana ho an'ny governemanta tsirairay avy dia tsy tontosa, namela orinasa maro tao amin'ny bankiropitra ary nisy fiantraikany ara-toekarena matotra, ary koa ny mpiasa ao amin'ny indostria izay nilaozan'ny ankamaroany. Ny vokatr'ireny fanakatonana ireny dia manomboka misarika ny sain'ny governemanta satria maro no mijaly amin'ny iray amin'ireo krizy lehibe indrindra tato anatin'ny taonjato lasa, ka nahatonga azy ireo hisokatra bebe kokoa hanomboka hamerina ny toe-karena. Azo antoka ny milaza fa ny toekarena amin'ny alina dia miteraka fiatraikany ara-toekarena lehibe ho an'ny tanàna sy firenena manerantany.
Ny nitondra antsika tamin'ny 2020 dia a tsy fahampian'ny fahalalàna sy marefo momba ny virus izay nanjary areti-mandringana, tamin'ny tapaky ny taonjato faha-21. Na izany aza, ireo fotoam-pitsapana ireo dia nitaky firaisana marobe kokoa noho ny hatramin'izay ary nanokatra varavarana ho an'ireo andrim-panjakana, fikambanana ary orinasa, na miankina na ho an'ny daholobe hanatevin-daharana hery "Mitady marimaritra iraisana".
Ny azo lazaina azo antoka dia ny tsy nahafahan'ireo mpikarakara klioba mivoaka tao anatin'ny herintaona mahery, ka nahatonga azy ireo ho "mosarena ara-tsosialy" manokana rehefa avy niaritra ny vokatry ny fitrandrahana karana sy ny fanarahana ny ora tena henjana.
SieXsein Global dia teraka tamin'ny firaisana iraisam-pirenena ekipa manam-pahaizana izay manana tantara lava eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, tontolo iainana, teknolojia ary indostrialy. Ny tanjona lehibe sy ny fahaiza-manao dia ny hiteraka habaka arovana, miaraka amina fampiharana izay manome tahan'ny fahombiazana hatramin'ny 99,99% amin'ny fifehezana ireo viriosy voahidy (toy ny COVID-19). Ny fampifangaroana fitsipika fototra 4 ao amin'ny ekipa fampandrosoana; ny fisorohana, ny fangejana, ny fanalefahana ary ny fanaraha-maso dia manome 99,9% taham-pahombiazana amin'ny fikambanana na vondron'olona maniry hampihatra ny teknolojia.
Araka ny Tsy toy ny fanandramana Sala Apolo, ny kaonseritra Sant Jordi ho avy dia tsy raisina ho fitsarana ara-pitsaboana, fa hetsika "ara-barotra" satria efa matoky ny fiarovana azy ireo ny mpikarakara. Ankoatr'izay, ny mpanaraka kaonseritra dia ho Fitiavan'ireo mpankafy lesbiana fa tsy mpilatsaka an-tsitrapo ary tsy hosedraina izy ireo aorian'ny hetsika izay ifampidinihana miaraka amin'ny SieXsein Global sy ireo governemanta manerantany ho an'ny fandrosoana sy ny fanokafana ireo toeram-pialam-boly manerantany izay mahazo valiny lehibe noho ny ny mampiavaka ny rafitra aroso.
Carmen Alvarez, tale jeneralin'ny SieXsein Global dia nanambara fa, "Izahay irery no orinasa nahomby tamin'ny fampifangaroana sy ny fanolorana ireo haitao farany sy farany manohitra ny COVID-19 amin'ny vahaolana tokana, na any Espana na iraisam-pirenena".
Etsy ankilany, Joaquim Boadas, sekretera jeneralin'ny Fikambanan'ny Nightlife International », hoy izy,” Tsy safidy ny fiandrasana ny tsimatimanota, satria ny ankamaroan'ny orinasam-piainana dia tsy hipetraka intsony amin'izay. Izany no mahatonga anay manantitrantitra ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta mba hanaporofoana fa miaraka amin'ny fepetra mety, afaka misokatra amin'ny fomba azo antoka ny toerana ”.
Fitsapana piloto, fitaovana ilaina amin'ny ho avin'ny indostria
Ny indostrian'ny fiainana amin'ny alina dia mety ho vahaolana amin'ny areti-mandringana ankehitriny satria mety ho loharanom-pahalalana voalohany izany miaraka amin'ireo manampahefana ary manao toy ny firewall hahitana ny fihanaky ny viriosy. Ny fananana fitsapana COVID hiditra amin'ny toerana misy ny fiainana amin'ny alina dia mety hahazo ampahany betsaka amin'ny vahoaka ihany koa hizaha toetra rehefa tsy hanao izany izy ireo. Manohana ny fitsapana rehetra atao amin'ny toerana izahay ary hahita ny vahaolana tsara indrindra hamelomana indray sy ny indostria izay nakatona tanteraka tamin'ny taona lasa.
Ny haino aman-jery dia nanako ny fitsapana maro izay efa natao tany amin'ny toerana toa an'i Amsterdam, toerana nahitana olona 1,300 XNUMX nanatrika hetsika mozika tao amin'ny Ziggo Dome natao handinihana ireo loza mety hitranga amin'ny fisokafan'ny toerana vaovao sy ny drafitra fanalefahana ny fetra fanidiana. Toerana Sala Apolo, any Barcelona ary ny tsy fifindran'ny mpandray anjara aminy tamin'ny fitsapana piloto natao tamin'ny volana desambra lasa teo.
Ankoatr'izay, tamin'ity herinandro ity ny governemanta Catalan sy ireo mpikarakara ny festival dia nanambara ny kaonseritra an-tariby iray any Palau Sant Jordi any Barcelona ny 27 martsa ho avy izao. Ireo mpanatrika dia tsy maintsy manao fitsapana haingana sy fizahana amin'ny iray amin'ireo toerana telo, na ny Sala Apolo, Luz de Gas na efitrano fampisehoana Razzmatazz. Ireo mizaha toetra ratsy dia afaka mandray anjara amin'ilay hetsika amin'ny saron-tava FFP2, fa tsy mila fanalavirana sosialy.
Hizara ho toerana efatra anefa ny faritra ka samy hampiantrano olona 1,800 ary hisy ny ezaka hatao mba hialana amin'ny fivangongoana eo amin'ny fidirana sy ny fivoahana. Hampiantrano mpihaino olona 5,000 XNUMX (mijoro), miaraka amin'ny fitsapana antigen ho an'ny mpanatrika rehetra fa tsy misy fanalavirana sosialy.
Tsy toy ny fanandramana Sala Apolo, ny kaonseritra Sant Jordi ho avy dia tsy raisina ho fitsarana ara-pitsaboana, fa hetsika "ara-barotra" satria efa matoky ny fiarovana azy ireo ny mpikarakara. Ankoatr'izay, ny mpanaraka kaonseritra dia ho mpankafy Fitiavana lesbiana fa tsy mpilatsaka an-tsitrapo ary tsy hitsapana azy ireo aorian'ny hetsika.
FAA amin'ny mpandoa $ 14,500 XNUMX amin'ny onitra amin'ny fanelingelenana ireo mpikarakara ny sidina